Organizasim-pirenena momba ny sidina Metro dia any Istanbul - RayHaber
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulNational Organisation for the flight flight in Istanbul
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, Railway, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, Faritra Marmara, Metro, TORKIA, tram 0
fandaharana mac nasionaly ho an'ny serivisy metro ao istanbul
Fifanarahana nasionaly ho an'ny sidina Metro ao Istanbul. IMM, izay ho nilalao ny Zoma hariva ao Torkia - Albania lalao iraisam-pirenena ny fotoana mahamety izany dia mitohy ny ora sasany metro andalana.
Istanbul Metropolitan Monisipaly (IMM) ny fotoana ao Istanbul Metro lalamby niasa araka ny mpiray dia Zoma Oktobra 11 21 ora: xnumx't izay ho nilalao tao Torkia - Albania no nohavaozina noho ny lalao iraisam-pirenena.
Noho ny lalao baolina kitra M3 Kirazli-Olympic-Basaksehir, ny T1 Kabatas-Bagcilar, ny T4 Topkapi-Masjid-i Selam ary ny F1 Taksim-Kabatas tsipika dia nitarina tamin'ny 01: ora 30.
M1A Yenikapı-Atatürk Airport, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ary M6 Levent-Boğaziç.
Fikarakarana ny fanadinana OEF ho an'ny Metro ao Izmir 02 / 06 / 2017 OEF Fandaharam-pandinihana Iraisam-pirenena ho an'ny Izmir Metro Vondron'ny: Izmir Metro, 03 - 04 Ny daty 2017 June dia hatao ao amin'ny Open Education Faculty (OEF) nanambara ny asabotsy sy ny alahady noho ny fotoam-piofanana voamarina. Izmir Metro, 03 amin'ny asabotsy amin'ny volana Jiona, 06.00-06.30 ora ny fitaterana eo anelanelan'ny 10 minitra, 06.30-20.00 ora, 5 minitra, 20.00-00.20 ora isaky ny 10 minitra. Ao amin'ny 04 06.00-07.00 ny Alahady Jona 10 minitra eo amin'ny fotoana, eo anelanelan'ny ora 07.00-19.30 6 minitra, eo anelanelan'ny ora 19.30-00.20 10 ho natao tany iray minitra.
Ramadan Fikarakarana ny Metro ao Istanbul 06 / 05 / 2019 Ny tanànan'i Istanbul Metropolitan, 'ny volana Ramadan' noho ny fanovàna tamin'ny fotoanan'ny metro dia nandeha niova. Amin'ny làlan'ny lalamby, ny ora fanokafana dia natolotra tamin'ny 01.00, raha ny zoma sy ny asabotsy kosa dia natomboka tamin'ny 02.00 ny ora fanokafana. Araka ny fanambarana nosoratan'i Metro Istanbul; M1A Yenikapı-Atatürk Airport nandritra ny volana Ramadan, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Olympic-Başakşehir, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 , Ny T6 Topkapı-Mascid-i Selam sy ny F1 Taksim-Kabataş dia namaritra ny laharana. Fashion, TF4 Maçka-Taşkışla ...
Taom-panompoana vaovao ho an'ny seranam-piaramanidina fiantsonan'i Uludağ 28 / 12 / 2016 Ny fandaharam-potoana vaovao amin'ny seranam-barotr'i Uludağ: Ny Bursa Teleferik AŞ Jeneraly Burhan Özgümüş dia nanambara fa ny 31 ao Uludağ dia homena fiara tsy tapaka amin'ny serivisy amin'ny 08.00 ka hatramin'ny 02.00 ny ampitso. Bursa Teleferik Inc. Lehibe Jeneraly Burhan Ozgumus, taorian'ny fisokafan'ny vanin-taona ririnina, dia nitombo ny isan'ny mpandeha, hoy izy. Amin'ity toe-javatra ity, ny taona vaovao dia hiditra ao amin'ny fihaonambe ho an'ireo izay te-hanao fandaharana manokana ho an'ny Taom-baovao Özgümüş, "Fiara CCL 31 ho an'ny Krismasy, 08.00 Desambra amin'ny asabotsy, ny ampitso ho any amin'ny serivisy 02.00'ye tsy tapaka. Na izany aza, raha mbola nangatahinay, dia hanohy hidina sy hanala ireo mpandeha izahay. "
Fandaharana Taom-baovao ho an'ny serivisy bus ao Bursa 31 / 12 / 2015 Fandaharana Taom-baovao ho an'ny serivisy bus ao Bursa: Araka ny didy navoakan'i BURULAŞ, ny tolotra fitaterana an'habakabaka izay hiasa eo anelanelan'ny Desambra 31 Desambra sy ny 1 Janoary dia nambara. Ny Buses koa dia hiasa mihoatra ny ora, raha niditra ny taona vaovao i Bursa. MANDEHANA HITONDRA ANTSIKA NY TARIFF ny alahady tany BURSA
Fiaramanidina Erdogan ho an'ny sidina Bursaray 21 / 10 / 2016 Fandaharan'asan'i Erdoğan ho an'ny sidina Bursaray: Noho ny fanakatonana ny station Şehreküstü ho fiasàna noho ny fitsidihan'ny filoha Erdoğan an'i Bursa rahampitso, dia nisy fandaharana vaovao natao ho an'ny sidina. Araka ny fandaminana; Ny Bursaray Şehreküstü Station 22 dia hohidiana aorian'ny 11.00 amin'ny asabotsy oktobra (rahampitso). Ny làlan'ny laboratoara sy ny oniversite dia handeha any amin'ny fiantsonan'i Merinos. Ny seranam-piaramanidina dia hihazakazaka eo anelanelan'i Merino sy Osmangazi. Ny fiaran-dalamby avy any Kestel dia mankany amin'ny fiantsonana Demirtaşpaşa. Hisy fiara fitaterana bus eo anelanelan'i Merinos sy Gökdere. Noho izany antony izany: ny mpandeha avy amin'ny fitarihana ny Labor - University ary mankany amin'ny fiantsonan'ny Osmangazi, mialà ao amin'ny lamasinina ao Merinost ary miditra amin'ny lamasinina mifanatrika ...
Fikarakarana ny fanadinana OEF ho an'ny Metro ao Izmir
Ramadan Fikarakarana ny Metro ao Istanbul
Taom-panompoana vaovao ho an'ny seranam-piaramanidina fiantsonan'i Uludağ
Fandaharana Taom-baovao ho an'ny serivisy bus ao Bursa
Fiaramanidina Erdogan ho an'ny sidina Bursaray
Fandaharam-potoana vaovao ho an'ny sidina Bursaray
Fikambanana ho an'ny Bursaray
Fiaraha-mientan'ny Ramadany ho an'ny fandaharam-potoana amin'ny Ferry ao Malatya
Fetin'ny Sorona ho an'ny YHT
Fiantohana fitaterana sy fiara fitateram-bahoaka ho an'ny lalao nasionaly avy amin'ny Metropolitan Eskişehir